News Collection: टाटु खोप्नुअघि सोच्नुहोस्
टाटु खोप्नुअघि सोच्नुहोस्
काठमाडौ, वैशाख १३ - काठमाडौं- शरीर सुन्दर बनाउने रहरले टाटु कोर्दै हुनुहुन्छ भने सोच्नुहोस् । टाटु बनाउनुअघि नै सचेत र सावधान नभए त्यसले समस्या पैदा गर्न सक्छ । यसले छाला तथा यौन रोगको समस्या निम्तिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठले टाटुले छालामा संक्रमण, दुबी, एलर्जी हुने र खत बढ्ने समस्या निम्तिने बताए । छालामा संक्रमण, सुईले छेड्दा अत्यधिक रगत आउने समस्या भएको र सरुवा रोग भएकाले टाटु गराउनुअघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने उनले बताए । छालाको दोस्रो तह (भित्री भाग) सम्म सुईको सहयोगले स्थायी रंगहरू पठाएर टाटु बनाइने हुनाले यो एक प्रकारको शल्यक्रियाझैं भएको उनको भनाइ थियो । 'प्रयोग हुने सुई सफा र किटाणुरहित हुनुपर्छ,' उनले भने ।
एकपटक प्रयोग भइसकेको सुईले फेरि टाटु बनाउँदा प्रयोगकर्तामा टिटानस, एचआईभी एड्स, हेपाटाइटिस, सिफलिस, क्षयरोग र कुष्ठ रोग समेत सर्न सक्ने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
रंगको स्तरीयता र टाटु कलाकारको दक्षताबारे पूर्वजानकारी राखिनुपर्ने उनले बताए ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार संसारभरिका दक्ष टाटु कलाकारहरूले नीलो र कालो रंगका लागि कार्बन, राताको लागि सिनाबार र मर्करी सल्फेट, हरियोका लागि क्रोमिक अक्साइड र पहेंलोका लागि क्याडमियम सल्फेटलगायतका रसायन प्रयोग गर्छन् । 'रंगको ब्रान्ड र आधिकारिकताबारे बुझ्न पनि जरुरी छ,' उनले भने । चिकित्सा विज्ञानमा समेत चोटपटक र खत लागेको ठाउँलाई छोप्न र आँखीभौं नभएकाका लागि राम्रो देखाउन टाटुको प्रयोग हुन्छ । विशेष समूह र युवापुस्तामा लहरमा टाटु कोराउने र फुर्सदमा पछुताउने गरेको देखिएको उनले बताए ।
चिकित्सकीय विधिको प्रयोगबाट स्वदेशमा टाटु निकाल्दा झन्डै २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गर्छ । नेपाली युवा पुस्ताले टाटु कोराउन न्यूनतम १ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन् । उनी सिनामंगलस्थित काठमाडांै मेडिकल कलेजमा लेजर एवं कस्मेटिक शल्यक्रिया विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
'जो पायो त्यहीसँग र जुन रंगले मन लाग्यो, त्यही रंगले टाटु कोराउनु हुन्न,' उनले भने, 'सबैलाई सबै रंग उपयुक्त हुन्न, कुनै रंगले एलर्जी पनि हुन सक्छ ।' लेजर प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज ढंगले कालो र नीलो रंग पछि निकाल्न सकिए पनि रातो/हरियो निकाल्न कठिन हुने चिकित्सकको भनाइ छ ।
छ वर्षको अवधिमा रंगले एलर्जी भएका एक महिला र दुई पुरुषको शल्यक्रिया गरेर आफूले टाटु निकालेको उनले बताए । नयाँदिल्लीस्थित टाटु गिज्मोका कला प्रमुख अरविन्द गर्गले एसियाली बजारमा स्वास्थ्यवर्धक र उच्चस्तरको युरोपेली एवं अमेरिकी ब्रान्डका सुई, मसी र मेसिन आइ सकेको हुनाले उपभोक्ताले हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।
उनी भारतबाहेक बैंकक र न्यूयोर्कमा टाटु सामग्रीको बिक्री गर्छन् । 'बुझेर गराउनुस्, पछुताउनु पर्दैन,' उनले भने, 'इन्टरनेटमा पहुँच भएका युवापुस्ताले गुगल र याहु सर्चमा गएर यसबारेमा सहजै बुझ्न सक्छन् ।' संस्कृतिविद् हरेराम जोशीले प्राचीन कालमा वंश
(सूर्य, चन्द्र र नाग वंश आदि) देखाउन र रोग निवारणका लागि टाटुको प्रयोग हुने गरेको बताए ।
शोधअनुसार सन् १९९१ मा अस्टि्रया र इटालीको बीचको पर्वतीय क्षेत्रमा हिउँमा फेला परेको एक आदि मानवको घुँडा, मृगौला र गोलीगाँठोमा ५७ वटा टाटु थिए । पाँच हजार वर्ष पुरानो मानिएको उक्त मानव शरीरमा रोग निवारणका लागि टाटु गरिएको शोधहरूमा उल्लेख छ । 'अहिलेको पुस्तालाई संस्कृतिसँग के मतलब ? अहिले फेसन र मोडलिङका लागि यसको प्रयोग हुन थालेको छ,' संस्कृतिविद् जोशीले भने ।